नेपालका दलहरू को कति धनी ? • Pokhara News by Ganthan
नेपालका दलहरू को कति धनी ?
प्रकाशित २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
काठमाडौं, २७ भदौ /राजनीतिक दल सञ्चालनको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा लेबीलाई लिने गरिएको छ। दैनिक क्रियाकलाप र पार्टी सञ्चालनका लागि लेबीलाई राजनीतिक दलहरूले मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।
घरभाडादेखि पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत अनिवार्य मानिन्छ। यद्यपी राजनीतिक दलहरू आफ्नो आयव्यव खुलेर सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्। कसरी चलिरहेका छन् त पार्टीहरू, आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ।
संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको खातामा ५ करोड रुपैयाँ बचतका रूपमा देखिएको छ। भर्खरै पार्टी र भातृ संगठन नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले पनि पार्टीको खातामा धेरै रकम जम्मा भएको हो। कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यता, नयाँ सदस्यता तथा पुराना सदस्यहरूबाट सदस्यता शुल्कस्वरूप लेबी संकलन गर्ने गरेको छ। नयाँका लागि २ सय र पुरानाका लागि १ सय संकलन गर्ने कांग्रेसको प्रावधान छ।
यस्तै नेकपा एमालेको खातामा ४ करोड
नेकपा माओवादी केन्द्रको खातामा ५ लाख
राप्रपा नेपालको खातामा ४ लाख ८३ हजार
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको खातामा २५ लाख
नेकपा मालेको खातामा ४ लाख
#दलहरू को कति धनी
सेक्टेम्बर ११ आक्रमणका ११ तथ्य
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ९३ परीक्षण, २ पोजेटिभ, ७३ नेगेटिभ २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
अमेरिकामा दुई नेपाली मृत फेला, कोरोनाको रिर्पोट आउन बाँकी २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
कोरोनाको बिरामी जाँच्ने तीन वटा बुथ निर्माण, पोखरामा गण्डकी अस्पतालमा राखीने २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
कोरोना संक्रमित बढे पछि लकडाउनमा कडाइ, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाइने २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि कर्मचारीलाई बिदा बस्न नपाइने (१२ बुदे निर्णय) २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
पोखरा महानगरपालिका वडा—४ मा विपन्न ५५ परिवारलाई राहत वितरण २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
पोखराको उत्तमचोकमा होटलका सेफ मृत फेला २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
नेपालमा थप ३ जना कोरोना संक्रमित भेटिए २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ६१ नमुना संकलन, २ पोजेटिभ, ४३ नेगेटिभ २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६
पोखराको राहत कोषमा प्याब्सनको ५ लाख २७ भाद्र २०७३, सोमबार ०९:२६